Xulashada sheekooyinka jira
Dib -u -eegista sheekooyinka jira
Khadka naxariista leh, waxaa qoray Patrick Modiano
In ay deynta aan la soo koobi karin la qarnigii XNUMXaad. Waqti sii kordheysa oo lagu soo oogay sheekooyin waaweyn markii aan ka guureyno waqtiga, Modiano wuxuu nagu hogaamiyaa sheeko dib u abuureysa fikradaas naxdinta leh ee ephemeral. Fikradda raadraaca suurtogalka ah ee aan awoodno, ama ...
Jasiiradda Geedka lumay, waxaa qoray Elif Shafak
Geed kastaa wuxuu leeyahay midhihiisa. Laga soo bilaabo geedka tufaaxa ee jirrabadiisa qadiimiga ah, oo ku filan inuu jannada naga saaro, ilaa geedka berdaha ah ee caadiga ah oo leh midhihiisa aan caadiga ahayn oo ay ku raran yihiin calaamad u dhaxaysa kacsiga iyo xurmada, taas oo ku xiran hadba sida aad u eegto iyo, dhammaanba, waxay kuxirantahay. yaa eegaya... Sheeko ku jirta…
3-da buug ee ugu fiican ee uu qoray Juan Carlos Onetti
Juan Carlos Onetti oo aan guban karin, oo ay weheliyaan Mario Benedetti iyo Eduardo Galeano, ayaa ka dhigaya suugaan saddex -geesood ah Uruguay -ka caadiga ah ilaa Olympus -ka xarfaha ee Isbaanishka. Sababtoo ah saddexda dhexdooda waxay daboolayaan wax walba, nooc kasta oo tiraab, aayad ama miisaska saaran. In kasta oo mid kastaa bixiyo taas ...
Xagaaga, waxaa qoray Karl Ove Knausgård
Sheekada noloshu waxay ku jirtaa isbeddelka meertada leh ee xilliyadu waxay calaamad u tahay gelitaanka iyo ka bixista xiisaha leh ee goobta mid kasta. Waagii hore, dhalashada jiilaalka waxay caqabad ku ahayd badbaadada. Maanta ma aha sheeko muuqata, marka la eego dadaalka Karl Ove Knausgard ...
Qofka i sugaya aniga oo mugdiga fadhiya, waxaa qoray Antonio Lobo Antunes
Illowgu wuxuu leeyahay xaraashka ah in la hilmaamo xitaa milicsiga u gaarka ah oo ah qaab difaac, halkaas oo qofku ku caddeeyo nooc ka mid ah soliloquies -ka la mooday inay yihiin fikradaha loo gudbiyo milicsigayaga. Taasi waa fasiraadda ugu adag kahor fiirintayada wax isweydaarsiga ah. Waxaa laga yaabaa, in ...
Wadnaha Triana, oo uu qoray Pajtim Statovci
Waxa ku saabsan xaafadda Triana ee caanka ah iyo xitaa heesaha ma socoto. In kasta oo cinwaanku tilmaamayo wax la mid ah. Xaqiiqdii, Pajtim Statovci duugga ah ee wanaagsan ayaa laga yaabaa inuusan xitaa ka fiirsan dhacdadan oo kale. Wadnaha Triana wuxuu tilmaamayaa wax aad uga duwan, xubinta is -beddeli karta, u ahaanshaha, ...
Waxaan kaligay ahaan doonaa oo aan xaflad haysan, waxaa qoray Sara Barquinero
Waa run in ay adag tahay in la helo codad cusub oo ka hadlaya jaceylka ku qotoma falsafadda, leh falsafad, ka sarraynta taabashada maqaarka ama xitaa ka kacsiga. Iyo in arrintu ay tahay caqabad sheeko oo dhan halkaas oo qoraaga ama qoraaga heeganka ahi muujin karo, haddii kale ...
Qoyska Martin, waxaa qoray David Foenkinos
In kasta oo ay isu qarinayso inay tahay taariikh caadi ah, waxaan horeba u ognahay in David Foenkinos uusan ku dhex milmin asluubta ama cilaaqaadka qoysaska dhexdooda isagoo raadinaya siraha ama dhinacyada mugdiga ah. Sababtoo ah qoraa Faransiis ah oo hore dunida caan uga ahaa ayaa ka badan dhakhtar qalliin xarfaha qaab ahaan iyo ...
Saddexda buug ee ugu fiican Emil Cioran
Ma jiro qof si buuxda u qancinaya in uusan gaarin 84, sida uu ahaa Cioran. Waxaan sidaas u leeyahay sababta oo ah go'aanka ah inaan u tilmaamo qoraagan inuu yahay nihilist dib -u -dhac leh oo tabashadiisa iyo cabsida noloshiisu ay ka kooban tahay qaab iyo maado sheeko u dhiganta cambaareynta nolosha. ...
Buugaag waa inaad akhridaa ka hor intaadan dhiman
Waa maxay ciwaanka iska yeelyeelka yar ee kan ka wanaagsan? Kahor intaadan dhiman, haa, dhawr saacadood ka hor intaanad dhegaysan, waxaad qaadan doontaa liiskaaga buugaagta muhiimka ah oo aad ka gudbi doontaa iibiyaha ugu fiican ee Belén Esteban kaas oo xidha wareegga wax-akhris ee noloshaada… (Waxay ahayd kaftan, macabre). iyo kaftan dhiig leh) Ma aha wax ka yar…
Nolosha mararka qaarkood, waxaa qoray Juan José Millás
In Juan José Millás xariifnimada ayaa durba laga helay cinwaanka buug kasta oo cusub. Munaasabaddan, "Nolosha mararka qaarkood" waxay umuuqataa inay noo tixraaceyso kala daadsanaanta waqtigeenna, isbeddelada muuqaalka u dhexeeya farxadda iyo murugada, xusuusta ka kooban filimkaas oo aan awoodno ...
Bogga1 Bogga2 ... Bogga5 Xiga →